Ikhekhe lomtshato elihlekisayo - Amaqebengwana Omtshato
Ikhekhe lomtshato elihlekisayo
Iikhekhe zomtshato ezihlekisayo zinokuba lukhetho lwakho olufanelekileyo ukubonisa ulwalamano lwakho. Abathandi bekhekhe lomtshato abahlekisayo bongeza umnxeba kwisehlo esinexinzelelo ngamanye amaxesha. I-plethora yezinto ezintsha, ezingaqhelekanga kunye nezithandwayo zekhekhe lekhekhe lakho lomtshato zibandakanya abalinganiswa beempawu, izinto zokuzonwabisa kunye nomtshakazi okanye umyeni ohlekisayo. Unokukhetha ukuba ikhekhe lakho lomtshato lenziwe kwimifanekiso yakho. Nokuba uthatha siphi isigqibo, zininzi izimvo ezintle zokuhlekisa ikhekhe lomtshato.
Amaqebengwana eKhekhe abonakalisa ukuthanda kwakho kunye nomdla okhethekileyo
Ukuba ujonga into engaqhelekanga ngaphezulu kwekhekhe lakho lomtshato, cinga ukukhetha umfanekiso obonisa ukuzonwabisa okanye umdla okhethekileyo owabelana nawo kwiqabane lakho elizayo. Unokufumana ii-topers zekhekhe ezihlekisayo kwizibini ezithandayo NASCAR , Kunye nee-toppers ze Abalandeli baka-Harley Davidson okanye isibini esithandayo ukuthatha Iihambo zeATV kunye.
Ikhekhe lomtshato wentliziyo
Ikhekhe lomtshato elikhethekileyo
Imifanekiso yamaqebengwana omtshato wasebusika
Ezinye izimvo zokuyila:
Khetha ifayile ye- Disney ikhekhe lomtshato ukuba ucwangcisa ukuthatha ikhefu lakho lokutshata 'yeyona ndawo imangalisayo eMhlabeni.'
Ukuba unomtshato ngeHalloween, khetha i Isithambisi se-skeleton topper .
Ukuba uluhlobo lwesibini esihlala kwiijini kunye neminqwazi yenkomo, khetha i I-Gettin 'yatshitshisa i-cake topper .
Ukuba ungumthandi wokwenene wezilwanyana, a Umpheki wekhekhe lomxholo wesilwanyana sasekhaya lukhetho oluhle kakhulu.
Ukuba ukhetha ukuthenga enye yezi zinto zingaqhelekanga zekhekhe lomtshato, unokufuna ukufaka inqaku elincinci kufutshane nekhekhe echaza ukhetho lwakho lweendwendwe ezinokuthi zingakuqondi ukubaluleka kwesigqibo sakho.
Iipakeyiki zeKhekhe zoMtshato oMdaka
Ukuba kukuthathe ixesha elide kunokuba bekulindelwe ukuba ufike esibingelelweni, cinga ukwenza ingxelo ehlekisayo nenye yezi zinto zihlekisayo:
Ndikunye naye / Yena
Hayi Hayi Awungekhe!
Iicake Toppers zenzelwe ukuKufanekisa
Enye yeendlela zamvanje zokucwangciswa komtshato kukuqesha igcisa ukuba lenze ikhekhe lomtshato ngokwezifiso emfanekisweni wakho. Nangona zinokubiza kakhulu kwaye kufuneka zi-odolwe kwiinyanga ezininzi kwangaphambili, ezi zinto zingaqhelekanga zokwenza iikeyiki kukunceda ukhumbule usuku lwakho olukhethekileyo. Ukuba uthatha isigqibo sokuqesha igcisa ukuba lenze ikhekhe lomtshato elicwangcisiweyo, khumbula ukuba ube ngqo kwizicelo zakho. Faka iifoto zakho ezininzi zangoku kunye neqabane lakho elizayo, kunye nemifanekiso yezinye iikeyiki zomtshato ezihlekisayo ezenziwe ngendlela oyithandayo. Ukuba umculi unephothifoliyo ekwi-intanethi, sebenzisa le mizekelo njengesiqalo sengxoxo yakho.
Oku kulandelayo zezinye zeenkampani ezininzi eziza kuyila ii-topers zekhekhe lomtshato ezihlekisayo ezenziwe zafana nokufana nawe:
Ukuhlala In San Francisco Iiresiphi San Francisco Iihotele Ukuzilolonga Iividiyo Kunye Nomculo Ukukhempisha, Hikinging, Backpacking Gear And Equipment
Enkulu Nayo Indoda Mnyama Impahla
Ukuzilolonga Iividiyo Kunye Nomculo
French Imiboniso Yesilayidi
Ifanitshala Iintengiso Nama Brands
indlela yokufaka ikati yokubopha
indlela yokucoca i-weber cast iron grates
Umxhasi ophambili enkosi yesampulu
Izimvo zetheko lokuzalwa zabaneminyaka eli-13 ubudala ehlotyeni
indlela yokwenza ikhava yenja
Health And Special Iimfuneko